आकाशको 'पियारी' पूजा
Home मनोरञ्जन इन्स्टाग्राममा कस-कसलाई पछ्याउँछिन् पूजा ?
इन्स्टाग्राममा कस-कसलाई पछ्याउँछिन् पूजा ?
अभिनेत्री पूजा शर्मा ‘प्रेमगीत’ रिलिज अगाडिसम्म दर्शकमाझ खासै परिचित थिइनन् । तर, यो फिल्मले उनको करिअर हाक्ने गाडीको रुट नै परिवर्तन गर्‍यो । अहिले उनलाई ‘स्टार’ अभिनेत्री भन्न थालिएको छ । उनमा अहिले आफ्नै तागतले फिल्म सफल बनाउन सक्ने सामर्थ छ भनिन्छ ।
इन्स्टा लभर्स पूजाले बलिउड स्टार्सलाई बढी पछ्याउने गरेकी छिन् । उनले पछ्याउने लिस्टमा शाहरुख खान, सलमान खान, आलिया भट्ट, वरुण धवन, प्रियंका चोपडा, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, करण जोहरलगायत सामेल छन् ।
उनले नेपाली कलाकारलाई पनि खुब पछ्याउने गरेकी रहेछिन् । उनले प्रियंका कार्की, अनमोल केसी, सुगम पोखरेल, हेमन्त राना, अर्जुन पोखरेल, आकाश श्रेष्ठलाई फलो गरेकी छन् । अभिनेत्री शर्माले आफ्ना सर्वप्रिय निर्देशक सुदर्शन थापालाई त लिस्टमा पार्ने नै भईन् ।
पूजाले फिल्म ‘मधुमास’ मा आर्यन सिग्देल, ‘प्रेमगीत’ मा प्रदीप खड्का र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ मा पल शाहसँग काम गरेकी थिइन् । तर, रोचक कुरा उनले यी कुनै पनि नायकलाई इन्स्टामा फलो गरेकी छैनन् । आर्यनसँग ठिकठाक रहेपनि प्रदीप र पलसँग भने उनको अहिले ‘पानीबाराबार’ रहेको खबर छ ।
पार्टी एकता विश्वकै असाधारण घटना : अध्यक्ष प्रचण्ड
मुलुकलाई अघि बढाउन संविधान संसोधन हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली